China WP-WDG System – Tinye Na Agrochemical Ubi ụlọ ọrụ na-emepụta | Qiangdi
Nke mbu, nri ihe oriri sitere na nri - ihe ndi a gbanwere na nke mbu 3 m3igwekota maka premixing, na ájá mkpoko ga-anakọta ájá n'oge nri usoro, mgbe ahụ, mbuaha ihe banye QDF-600 ugboelu igwe nri maka-egwe ọka, na mmepụta urughuru size nwere ike gbanwee site n'ịgbanwe dị iche iche n'usoro n'usoro ọsọ nke classifier wheel ,. Mgbe egwe ọka, ihe ga-agafere na ajọ ikuku na ntụ na-anakọta n'elu 4m mbụ3 igwekota site na ike nke onye na-akwado ya, wee nyefee nke abụọ 4m3 igwekota maka agwakọta tupu ngwugwu ma ọ bụ nyefee usoro WDG.
Usoro WP / WDG - Tinye na Usoro Agrochemical Flow
Usoro WP bụ ngwakọta zuru oke nke teknụzụ jet, jikọtara teknụzụ na teknụzụ njikwa ọgụgụ isi. nke bu ajuju ahia maka ogwu na-ata otutu otutu ma megharia ，
WDG (granul dispersible granule) makwaara dị ka wettable ntụ ntụ akọrọ suspending gị n'ụlọnga ma ọ bụ ọka ụdị, na akụrụngwa maka wettable ntụ ntụ (WP) kpụrụ granulation otu ugboro na mmiri, nwere ike ngwa ngwa gbasasịa ma gbasasịa, granular nkwadebe na-etolite elu kwụsịtụrụ siri ike mgbasa usoro.
Granulation bụ isi nke usoro dum. Granulator bụ isi ihe iji jide n'aka na pesticides na usoro ihicha usoro, nke dabere na njirimara nke pesticides, data nnwale na ngwa ngwa injinia, na-ahọrọ ntụgharị extrusion na-agbanwe ma ọ bụ ejima ejiri ihe nkedo. Ngalaba), Ma ọ bụ ịghasa granulator (Tinye usoro mmiri jụrụ oyi na ngalaba nke Granulation), Ma ọ bụ ihe ndina a na-etinye ihe ndozi (usoro ihe ndina a na-emegharị emegharị na usoro extrusion dị iche). chọrọ ihe dị n'ime mmiri nke granulation bụ ihe dịka 8-18%. na njirimara ngwaahịa na usoro mmepụta, iji chọpụta nhazi nke usoro ahụ gụnyere: ịgwakọta, granulation, ihicha, nyocha, nkwakọ ngwaahịa, sistemụ ikuku ọkụ, usoro mwepụ uzuzu.
Chart Chart Of Fluidized-bed Jet Mill WP Line / WDG Line
Nke mbụ, a ga-ebufe ihe akụrụngwa na 1000L Buffer ， wee gaa ZGH-1000 igwe igwe igwe kwụ otu ebe site na Vacuum ZKS-6 maka ịgwakọta mmiri wee banye na XL-450 extrude granulator (3pcs) site na onye nkesa 500L maka granule mmiri, wee gaa QZL- 1300 pelletor, na ZQG-7.5 X 0.9 Vibrate Fluid-bed draya warara granulu na mgbe ZS-1800 centrifugal vibration sieve maka sieve iji nweta granulu chọrọ.
Fluid ndina draya N'ihi Granulation
Vibrating bed bed draya maka chemical ntụ ntụ
Vibration fluid bed bụ teknụzụ ọhụụ emepụtara na ndabere akwa akwa mmiri. A na-agbakwunye igwe na-arụ ọrụ na akwa mmiri. Wet ihe ndi ozo abanye na ikuku ikuku ma mekwa akwa akwa. A na-ewepụ ihe ahụ n'ihi ike na-akpali akpali. Omume nke ikuku na-ekesa efere na-akpali mmịpụta nke ihe ngwongwo na ngagharị nke ihe na akwa mmiri. Ihe na-eme mmiri mmiri na-akpọtụrụ ikuku ọkụ ma n'otu oge ahụ na-eburu ọkụ na ntụgharị igwe. A na-ekpochapụ ngwaahịa a mịrị amị site na ọdụ ụgbọ mmiri.
1. Na-eji teknụzụ vibrofluidization dị elu, mmebi nke ihe mpempe akwụkwọ mịrị amị dị obere.
2. Ihe na-adịgide adịgide, mmegharị dị mma.
3. Vibrations na-eme ka mmiri ghara ịgba mmiri, ikuku ikuku ikuku na-ebelata, a na-etinyekwa ihe ole na ole.
4. Oge obibi ihe onwunwe na-agbanwe agbanwe, ogo ngwaahịa dị n'otu.
5. A na-eji ya maka ihicha ihe na-ekpo ọkụ nke okpomọkụ n'oge dị mkpirikpi, dịka, mmiri dị n'elu
ihicha nke CUSO4 · 5H2O nwere mmiri kristal, MgSO4 · 7H2O.
Na ọdabara akporo
Ike ga-eji na akọrọ ma ọ bụ jụrụ usoro, na ọdabara na urughuru bulky ma ọ bụ ahụ na-adịghị mfe eruba nke oge ufodu nke ngwaahịa, ma ọ bụ n'ihi na-eme ka ahụ na-erughị-achọ ma na-zuru ezu fluidization ọsọ nke ngwaahịa na mfe nkekọ, chebaara okpomọkụ ihicha na-ebu ihe gesso ngwaahịa elu mmiri mwepụ si.
.Dị Mpaghara bed
(M2) Ikuku ikuku ikuku
(OC) Tinyekwa ikuku okpomọkụ
(OC) Ike evaporation mmiri
ZLG4.5 × 0.60 Ugboro abụọ 70-140 40-70 70-90 ZDS32-6 1.1 × 2
ZLG6 × 0,45 Ugboro abụọ 70-140 40-70 80-100 ZDS41-6 1.5 × 2
ZLG7.5 × 0,60 4.5 70-140 40-70 130-150 ZDS42-6 2.2 × 2
XL Rotary na Extra Granulator
General nke ngwa
Igwe a na - ewepu otu uzo nke egweri ihe na - egweri ihe na - eme mmiri site na nchara nchara nke a na - enye maka pelletize na usoro ozo. Igwe nwere ike inweta uzo di iche iche site na igbanwe igwe nchara.
Ọ nwere ike ịhazi ihe mmiri ma nweta nha dị iche iche dị ka ihe na ihe achọrọ.
A na-ebufe ikike igwe site na eriri triangle-wheel na igbe gear na onye ọbịa, ma kesaa ike site na nnyefe akụkụ na igbe gear. Tinye akụrụngwa n'ime nri hopper, pịa ya site n'elu.
Mgbe agwakọtara, ihe ahụ juputara na nri nri ma mee ka extrusion na-apụ apụ site na agụba pụrụ iche. Mgbe ihe ahụ juputara na oghere dị n'etiti agụba na ntupu ihuenyo, mma mbepụ ga-egbutu ya n'ime nha.
Ouput 150-250kg / awa (flake udi), 50-100kg / awa (granule udi)
Granule nha 0.5-2mm
Max mgbali 294Kn (30T)
Akụkụ akara n'akụkụ 9.8Kn
Inye nri moto 2.2Kw
Igwe Granulating 2.2Kw
Mkpakọ moto 7.5Kw
Udia ịghasa ọsọ 6-33 mgbanwe
Compressing Wheel ọsọ 4-25 mgbanwe
Dimension nke igwe mkpakọ 240X100mm
Ibu ibu (odika) 2000Kg
Main unit akụkụ 1600X1000X2300mm
Control kabinet akụkụ 600X400X1300mm
Igwe ahụ kachasị dị mma maka ụlọ ọrụ ọgwụ, ụlọ ọrụ nri, ụlọ ọrụ ihe ọ solidụ solidụ siri ike na ihe ndị ọzọ, Ọ nwere ike ime ka ihe ọkụkụ kpaliri ihe ndị a chọrọ. Karịsịa, ọ bụ adabara akụrụngwa nwere nke nnyapade nrapado.
Akụkụ niile akpọtụrụ na akụrụngwa na igwe a bụ nke igwe anaghị agba nchara. Ọdịdị ya bụ ịma mma. Ọpụpụ ya bụ akpaka, ya mere ọ nwere ike izere ọnọdụ ndị mebiri emebi kpatara. Ọ bụ uwe-ike maka na akara mmepụta kwa.
Main oru patameters
Size nke igwe (mm) 300 400
Dayameta nke granule (mm) 2 ~ 2.2 (O nwere ike ịbụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ) 1.2 ~ 3 (O nwere ike ịbụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ)
N'ozuzu dimesions (mm) 700 × 540 × 1300 880 × 640 × 1300
Ike nke moto (kw) 3 4
Ibu (n'arọ) 350 400
Ike ikike (kg / h) 100 ~ 200 140 ~ 400
Full igwe anaghị agba nchara High Speed ​​igwekota
LGH vetikal ụdị igwekota na-emi esịnede ala-eziga ihe oars na elu na-agbawa ndisu, Oars na-aga n'ihu na-eziga ihe onwunwe n'elu tinyere mgbidi nke akpa.
Ọsọ dị elu na-akụpịa ihe na-agbaji ihe ahụ kpamkpam na-eme ka ngwongwo ihe dị ka vortex, iji mezue otu agwakọta na obere oge.
Atụmatụ nke akụrụngwa
LGH vetikal ụdị elu na-agba inggwakọta igwe bụ Kacha ọhụrụ ụdị elu-arụmọrụ igwekota anyị factory, nke anakọtara elu Usoro nke anụ ụlọ na oversea.The isi atụmatụ ndị dị ka na-esonụ:
1.Ahịhịa nke ihe eji eme ihe mgbe niile na-eziga ihe ahụ n'elu site na ike ikuku. Na ihe kachasị elu na-adaba na ala na etiti, iji mee ka usoro ihe dị ka vortex.
2.High-ọsọ ndinuak oars gbasaa nnukwu ihe kpamkpam nke eziga site na ala oars.
3.The ihe onwunwe nwere ike mix uniformly na a obere oge n'ihi nke abụọ oars elu-ọsọ mgbanwe. Mixgwakọta ọsọ na ịdị n'otu bụ nke kachasị mma na ụdị igwe agwakọta na ahịa ụlọ. Otu otu bụ 100% mix.
4.Start na-agbapụta valvụ, agbapụta ọsọ bụ nnọọ ngwa ngwa, na igwe dị mfe ọcha.
5.The igwe kọntaktị akụkụ mere site igwe anaghị agba nchara, n'oge agwakọta usoro, ihe agaghị volatilize, metamorphic na-efu.
6.The igwe suut maka dị iche iche proportional akọrọ na mmiri ihe na-mix, karịsịa suut maka inggwakọta nke ọkụkọ kachasi mkpa, etisasịwo ọgwụ, etisasịwo ọ drinkụ andụ na na.
ZS Rorary vibro ihuenyo
akpọkwara rotary vibro sifter, vibratory sieve.It ike iyo mmiri mmiri dị ka n'efu mmiri na waster mmanụ wdg, wepụ adịghị ọcha na ihe onwunwe, dị ka mmiri ara ehi ntụ ntụ, osikapa, ọka wdg Kọọ / ọkwa na mbuaha ntụ ntụ n'ime dị iche iche nke na ị chọrọ.
Rotary unyi / kol ultrasonic vibrating ihuenyo sifter igwe na adiaha elu usoro elu ọkaibe echetakwa akụrụngwa. Ọ mejupụtara ultrasonic na-emeputa ihe na vibrating ihuenyo. Ọ bụ ihe dị mkpa gbara ọkpụrụkpụ na echetakwa arụmọrụ. Igwe sieving a na - ejide ihe nchịkwa ultrasonic dị egwu ma mezie ọtụtụ nsogbu kpatara site na otu ugboro, na - achọpụta n'ezie ezi uche dị na ọrụ ultrasonic na vibration sieve.
Multi-ọrụ dị ka ndị a:
Multidị multi-layer nwere ike ịkepụta ma kewaa ise dị iche iche dị iche iche n'otu oge. O kwesịrị ekwesị maka ihe akọrọ.
Ngwakọta nke ihe siri ike na mmiri mmiri nwere ike iche nke ọma site na otu ma ọ bụ ọtụtụ ụdị oyi akwa n'ime ihe dị iche iche ọkwa.
3. Wepu adịghị ọcha
Unitlọ ọrụ ahụ nwere ike ịkewapụ ole na ole ma ọ bụ gosipụta ihe ụfọdụ site na ọtụtụ ihe
Nhicha usoro anyị na-eji ultrasonice ngwaọrụ maka Rotary unyi / kol ultrasonic vibrating ihuenyo sifter igwe
Kneader bụ akụrụngwa kachasị mma iji gwakọta, gwakọtara maka polymerize ihe nwere viscosity dị elu na elasto plastic. Ngwunye nke ọ bụla nwere iberibe abụọ nke akara sigma n'ime ụlọ w. Ọ na ọtụtụ-eji igwakorita, mix, azọpịa, achụsakwa ma re-polymerize elu viscosity tapawa ma ọ bụ elastoplastic ihe, nke na-apụghị esichara site n'ozuzu ntụ ntụ mixers na mmiri mmiri agwakọta. Enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ndị achọrọ maka nnukwu ntụpọ na-agwakọta dị ka ihe ọkụkụ, kemịkal, roba, ihe oriri na ọgwụ. Mmetụta dị mma karịa igwekota. Kneader bụ a pụrụ iche specialgwakọta akụrụngwa na abụọ pupụtara. Otu ngwa ngwa na-agbagọkarị n’ọsọ nke ọgbaghara iri anọ na abụọ kwa nkeji, jiri nwayọ na-agba ọsọ nke iri abụọ na asatọ na nkeji. Ọsọ dị iche iche na-eme ka ngwakọta ihe nweta homogenate ngwa ngwa.
Injinia ihe ọkụkụ
- Nhazi osisi
- Nhazi usoro, njikwa na akpaaka
- Mmepe ngwanrọ na mmemme ngwa ngwa
- Igwe n'ichepụta ihe
- Nhazi oru ngo
- Nlekọta ma na-achịkwa saịtị
- Ntinye na ule nke ngwa na njikwa
- Ngwa oru na ịnye ihe ọkụkụ
- ọzụzụ ndị ọrụ
- Nkwado n'oge niile mmepụta
Nkọwapụta Projectlọ Ọrụ
- Nnweta na echiche ọmụmụ
- Ọnụ ego na uru
- Oge nhazi na atụmatụ akụ
- Turnkey ngwọta, osisi nkwalite na modernization ngwọta
- Knowledgable injinia
- Iji teknụzụ kachasị ọhụrụ
- Na-erigbu ihe omuma enwetara site na otutu ngwa di iche iche na ulo oru obula
- leverage nka anyị nwere ahụmahụ injinia na mmekọ
Nke gara aga: LSM Vetikal Wet Stirring Mill
Osote: Popular Type Disc Type Jet Mill